Nabadoon Caan ahaa oo lagu dilay Magalada Muqdisho - Awdinle Online
Home News Nabadoon Caan ahaa oo lagu dilay Magalada Muqdisho
Nabadoon Caan ahaa oo lagu dilay Magalada Muqdisho
Kooxo hubeysan ayaa Agagaarka Masjidka Turkiga ee Xaafada Jamhuuriya ee degmada Kaaraan ee Gobolkan Banaadir waxaa ay ku dileen Oday Nabadoon ahaa, iyaga oo dilka kadib Goobta ka baxsaday.
Nabadoonka la dilay ayaa waxaa lagu Magacaabi jiray Nabadoon Cabdullaahi Ciise Hilowle, waxaana sidoo kale uu kamid ahaa Ergadii soo xushay Xildhibaannada Golaha Shacanka ee mudada xilgeyntooda ay dhamaatay.
Dilka Nabadoonka ayaa waxaa Goobjoogayaal ay sheegeen inay fuliyeen rag ku hubeysnaa Bustoolado, waxaana Goobta tegay Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda, iyo Ehellada Marxuumka, kuwaas oo Goobta ka qaaday Meydka.
Majirto cid weli sheegatay mas’uuliyada dilka loo geystay Nabadoonka, hayeeshee waxaa horay magaalada Muqdisho Odayaal kamid ahaa Ergada soo xushay Xildhibaannada Baarlamaanka Soomaaliya.
Previous articleAkhriso:- Magacyada Gudd loo Magacaabay shaqaaqadii ka dhacday Garoonka Aadan-Cadde
Next articleFallaar gilgilasho kaagama harto: Maxaa ka careysiiyay Wasiir Dubbe?